Goethite amethyst, oo sidoo kale si qalad ah loogu yeero cacoxenite amethyst - fiidiyow
Tags Ametustos, Cacoxenite, Goethite
Goethite amethyst, oo sidoo kale si khaldan loogu yeedho cacoxenite amethyst
Qof ayaa hal mar ugu yeeray waxyaabaha loo yaqaan 'cacoxenite' sabab la mid ah muuqaal aan muuqan oo u eg macdantaas, laakiin amethyst with cacoxenitemay ma jiraan haba yaraatee.
Waxaa taariikh ahaan loogu magac daray 'Cacoxenite' ee dalka Brazil. Wax yar kadib ma ahayn in daraasad la sameeyay lagu sameeyo isla markaana wakhtigaas aad looga daaho in la beddelo mashiinka suuq-geynta iyo dhaqanka dadka ee loogu yeero "Cacoxenite".
Goethite inclusions waxay sameysmayaan xirmo aad u caadi ah oo ah cirbado huruud ah ilaa bunni ah oo u muuqda wax xoogaa lamab ah.
Goethite amethyst asal ahaan
Qalabkan ayaa ah mid caadi ah oo ka socda agagaarka Ametista do Sul, oo horey loogu yeeri jiray Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brazil.
Goethite waa maadada loo yaqaan 'oxygenhydroxide iron' oo ay kujirto maaddo bir ah. Waa maadada ugu weyn ee miridhku iyo xayawaanka birta. Adkeynta Goethite waxay ka bilaabaneysaa 5.0 illaa 5.5 oo ku saabsan Miisaanka Mohs, iyo xaddiga culeyska gaarka ah wuxuu ku kala duwan yahay 3.3 illaa 4.3. Macdanta ayaa samaysata cirbad-eg sida kirisyo, bir irbad, laakiin sida caadiga ah waa mid aad u ballaaran.
Feroxyhyte iyo lepidocrocite waa polymorphs-ka birta ee loo yaqaan 'oxygenhydroxide FeO' (OH) oo ku xasilsan cadaadiska iyo xaaladaha heerkulka dusha Dhulka. In kasta oo ay leeyihiin qaacidad kiimiko oo la mid ah goethite, qaab dhismeedkooda kirismaska ​​ee kala duwan ayaa ka dhiga macdano gaar ah.
Intaa waxaa sii dheer, goethite waxay leedahay dhowr polymorphs-cadaadis sare leh iyo heerkul sareeya, kuwaas oo laga yaabo inay ku habboonaan karaan xaaladaha gudaha dhulka.
Amethyst waa buluug kala geddisan oo leh dambas midabkiisu yahay maqaar-saarista, birta wasakhaysan iyo xaaladaha qaarkood biraha kale ee kala-guurka, iyo jiritaanka waxyaabo kale oo raad ah, kuwaas oo keenaya beddelmo isku-dhafan oo adag. Adkeynta macdanta ayaa la mid ah sida "quartz", sidaas darteed waxay ka dhigeysaa mid ku habboon in loo isticmaalo dahabka.
Amethyst wuxuu ku dhacaa ubaxyada ugu horeeya min-guduud khafiif ah oo guduud ah ilaa guduud. Amethyst-ka waxaa laga yaabaa inuu soo bandhigo mid ama labadaba muuqaal sare, casaan iyo buluug.
Of xoojinta aad u variable, midabka ah ee ametustos waxaa inta badan la dhigay baxay karbaashyo siman tahay wejiyadii final Quruurado ah. Mid ka mid ah dhinaca farshaxanka ee lapidary lug sax jarida dhagaxa in midabka hab ka dhigaya midab ee jawharad dhamaystirtay dhqaalaha. Inta badan, xaqiiqada ah in mararka qaarkood oo kaliya lakabka dusha khafiif ah midab buluug waxa ay joogtaa dhagixii ama in midabka ma aha samaysyada dhqaalaha for goynta adag.
Goethite amethyst oo u dhashay Brazil
Tags Ametustos, Trapiche